Niova fo XRP Ny US dolara
Nohavaozina taminy 18/10/2021 00:14
XRP Ny US dolara. XRP vidin'ny US dolara androany amin'ny tsena fifanakalozana cryptocurrency.
1 XRP = 1.09 US dolara
Soavan'ny fifanakalozana. Ny tahan'ny fifanakalozana dinika dizitaly dia manana sanda iray isan'andro. 1 XRP dia 1.09 US dolara. 1 XRP nianjeran'ny 0.008666 US dolara. Ho an'ny 1 XRP izao dia mila mandoa ianao ny 1.09 US dolara.
Taham-panakalozana XRP Ny US dolara
Herinandro lasa izay, ny vidin'ny XRP dia azo vidina ho an'ny 1.14 US dolara. Herintaona lasa izay, ny XRP dia azo amidy amina 0.26 US dolara. Telo taona lasa izay, ny vidin'ny XRP dia azo amidy ho an'ny 0.46 US dolara. Eto dia aseho ny tabilaon'ny fifanakalozana amin'ny fotoana samy hafa. Nandritra ny herinandro, XRP mankany US dolara ny tahan'ny fifanakalozana dia niova -3.68%. Ny fanovana ny tahan'ny fifanakalozana ny XRP to US dolara mandritra ny herintaona dia 325.37%.
XRP (XRP) Ny US dolara (USD) sarimihetsika mivantana
Fiovan'ny Dinika dizitaly XRP US dolara
XRP (XRP) Ny US dolara (USD)
1 XRP 1.09 US dolara
5 XRP 5.47 US dolara
10 XRP 10.94 US dolara
25 XRP 27.35 US dolara
50 XRP 54.69 US dolara
100 XRP 109.38 US dolara
250 XRP 273.46 US dolara
500 XRP 546.91 US dolara
Mpanome tolotra dinika dizitaly izay manome ny 10.94 US dolara ho an'ny 10 XRP . Ankehitriny, 27.35 US dolara azo vidiana ho an'ny 25 XRP. Azonao atao ny mivarotra ny 50 XRP ho an'ny 54.69 US dolara . Azonao atao ny mifanakalo 109.38 US dolara ho an'ny 100 XRP . Androany 250 XRP = 273.46 USD. Raha hanova ny 500 XRP, 546.91 US dolara dia. takiana.
XRP (XRP) Ny US dolara (USD) Taham-panakalozana
Niova fo XRP Ny US dolara amin'izao fotoana izao 18 Oktobra 2021
18 Oktobra 2021, 1 XRP ny vidin'ny 1.102175 US dolara. 17 Oktobra 2021, 1 XRP ny vidin'ny 1.135636 US dolara.
XRP (XRP) Ny US dolara (USD) price tantara tabilao
XRP ary US dolara
XRP Code de crédit XRP. XRP ny fanombohana ny varotra eo amin'ny tsena fifanakalozam-bola 11/10/2021.